एनआइसी एसिया लघुवित्तको आईपीओमा मागभन्दा ३.६ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ। लघुवित्त कम्पनीमध्येकै ठूलो एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म मागभन्दा ३.६ गुुणा बढी कित्ताका लागि आवेदन परेको छ। आईपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार आईपीओ निश्कासनको आज दिउँसो साढे ३ बजेसम्म २ लाख ९० हजार आवेदनबाट करिब १६ करोड २७ लाख कित्ता खरिदका लागि...
साधना लघुवित्तको आईपीओ असार २१ गतेबाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यही असार २१ गतेदेखि रु ७ करोड ७ लाख ८० हजारबराबरको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। संस्थाले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ७ लाख ७ हजार ८ सय कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात १० हजार ८९० कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात...
लघुवित्तमध्येकै ठूलो आईपीओ आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा महँगो मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री हुने एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको रु. ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ आज बुधबार (असार १० गते) बाट बिक्री खुला गरिएको छ। यो लघुवित्तमध्येकै ठूलो आईपीओ पनि हो। करिब ३ महिनाअघि धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासनको स्वीकृति पाएसँगै एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडको सहायक...
चन्द्रागिरी हिल्सले रु. १८.४० करोडको आइपीओ निश्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमीटेडले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा केवलकार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट लगायत संचालन गरिरहेको कम्पनी आइपीओ निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका कुल १८ लाख ४०...
दुई लघुवित्त करिब ८ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनका लागि पुगे बोर्ड
काठमाण्डौ । दुई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आइपीओ निश्कासनका लागि आवेदन दिएका हुन् । साधना लघुवित्तले ७ लाख ७ हजार ८०० कित्ता आइपीओ निश्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ भने समाज...
माइक्रोफाइनान्स कम्पनीमध्ये हालसम्मकै ठूलो आइपीओ निश्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा महङ्गो मूल्यमा खरीदबिक्री हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता रु. १०० मै पाउने अवसर पाइने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएसँगै यो अवसर जुरेको हो । बोर्डको स्वीकृतिसँगै एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडको सहायक...
सानिमा इन्स्योरेन्सले रु. ३० करोडको आइपीओ निश्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआइसी एशिया क्यापिटल
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमीटेडले निकट भविष्यमै रु. ३० करोड बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले आइपीओ निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसका लागि एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमीटेडलाई कम्प्नीले निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रति शेयर रु. १०० अंकित...
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले दुईवटा कम्पनीलाई ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमीटेड र यूनाइटेड मार्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमीटेडलाई आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको हो । लिबर्टी इनर्जीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि गरी कुल ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँको...
बलेफी हाईड्रोको ३६.५५ लाख कित्ता आइपीओमा सनराइज, हिमालयन र कुमारी क्यापिटलले प्रत्याभूत गर्ने
काठमाण्डौ । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ३६,५५,९४० कित्ता शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । फागुन ६ गते यस विषयमा एक सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट...
काठमाण्डौ । नाफामा अत्यासलाग्दो गिरावट आएसँगै एचएसबिसी बैंकले ३५ हजार कर्मचारी कटौति गर्ने भएको छ । एचएसबिसी बैंक विश्वकै ठूलोमध्येको एक र यूरोपकै सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । बैंकका अफ्रिका, एशिया, ओसिनिया, यूरोप, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडल इस्ट लगायत क्षेत्रका ६४ देशमा ३ हजार ९०० अफिस रहेका छन् । विश्वभर बैंकका ४० मिलियन ग्राहक छन् ।...
अजोड इन्स्योरेन्सले रु. ३० करोडको आइपीओ ल्याउने
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्सले आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३० लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै बोर्डमा माघ २१ गते आवेदन दिएको हो । बोर्डले कम्पनीको आवेदनलाई माघ २६ गतेदेखि आइपीओ निश्कासनको पाइपलाइनमा राखेको छ...
हालसम्मकै ठूलो आइपीओमा नागरिक लगानीकोषको प्रत्याभूति, नबिकेको कित्ता सकार्ने
काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो आइपीओको अण्डराइटर नागरिक लगानी कोष हुने भएको छ । दोश्रो बजारको स्थायीत्वका लागि स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गर्न लागेको कोषले नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले ल्याउन लागेको हालसम्मकै ठूलो आकारको आइपीओमा प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त भएको हो । बैंकले निकट भविष्यमै १ सय रुपैयाँ अंकित दरका ८ करोड...
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा महङ्गो मूल्यमा खरीदबिक्री हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता रु. १०० मै पाउने अवसर पाइने भएको छ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले निकट भविष्यमै आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको हो । यो कम्पनीले ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आइपीओ...
रिलायन्स लाइफले रु. ६३ करोडको आइपीओ निश्कासन गर्ने, अवस्था औसतभन्दा कमजोर
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले निकट भविष्यमै ६३ लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले निश्कासन गर्न लागेको आइपीओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड ४ को रेटिङ...